Maalin: Janaayo 6, 2017
MOTAS Control iyo Xarunta Wicitaanka ayaa adeegay
Xakamaynta iyo Xarunta Wicitaanka ee loo yaqaan 'MOTAS Control and Call Center' ayaa la hirgaliyay: Shirkadda MlatAS ee Magaalada MlatAS si ay u ilaaliso isku-xidhka adeegga ballaadhinta ee ay gacanta ku hayso, si ay ula socdaan baabuurta iyo darawalada safarka isla markaana looga fogaado saxmadda khadadka isla markiiba. [More ...]
Gawaarida EGO waxay ilaalinayaan nidaamka kamaradaha: Basaska EGO waxaa loo isticmaalaa gaadiidka dadweynaha ee caasimada iyo nidaamka kamaradaha iyo nidaamka gawaarida (gps) waxay hubineysaa in rakaabka iyo wadayaashaba ay ku safri karaan jawi aamin ah. [More ...]
Keçiören Metro oo la furay xaflad
Kecioren Metro Waxaa Lagu Furay Munaasabad: Kecioren Metro, Madaxweyne Erdogan, Raiisel wasaare Yildirim, Wasiirka Arslan, Wasiiro, xildhibaano, waxay la kulmeen tiro badan oo muwaadiniin ah oo ka qeyb galay xaflada lagu furayay Dowlada Hoose ee Magaaladda Ankara ee Caasimadda. [More ...]
Suuqa tareenka ee Booska
Suuqa nolosha ee magaalada Bursa metro: Qof ku dhacay khadka metrooga markii uu kahadlayay taleefanka gacmeedkiisa ee Bursa wuxuu ka soo noqday kuwii dhintay. Rakaabkii iyo waardiyayaashii ilaalada wadada tareenka sugayay ninkan dhalinyarada ah ee ka badbaaday daqiiqada ugu dambeysay ee uu ku hoos jiray tareenka [More ...]
Guddoomiyaha Bursa Küçük wuxuu ku dhawaaqay xaaladdi ugu dambeysay ee Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare: Waxaan wax ka weydiinay Guddoomiyaha Bursa İzzettin Küçük wax ku saabsan tareenka xawaaraha-xawaaraha sare ku socda ee ay dadka magaaladu rajo sugayeen sannado. "Bal eeg, waad qori kartaa tan," ayuu yidhi [More ...]
Nalalka tamarta ayaa lagu rakibay lineka Akçaray
Doomaha tamarta ayaa lagu rakibay khadadka Ak :aray: Howlaha dhismaha ee gawaarida Akçaray, oo bixin doona raaxo iyo kordhinta xawaareynta gaadiidka Magaalada Caasimadda ah ee Kocaeli, ayaa si xawli ah ku socota. Hawlaha dhismaha khadka tareenka ayaa la soo gabagabeynayaa [More ...]
Agaasimaha Ganacsiga Turkiga iyo Ganacsiga Atalay ayaa booqday TCDD Taşımacılık A.Ş.
Türk-İş iyo Railway-İş Madaxweynaha Atalay ayaa booqday TCDD Transportation Inc.: Türk-İş iyo Madaxweynaha Railway-ganacsiga Ergün ATALAY ayaa booqday Veysi Kurt, Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. Madaxa xafiiska [More ...]
Raaxeysiga Barafka ee Baabuurka Baabuurta Denizli
Isukeenida Barafka ee Denizli Cable Car: Teleferik iyo Bağbaşı Plateau, oo ay furtay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli oo noqotay mid ka mid ah midabada lama huraanka u ah nolosha bulshada ee magaalada tan iyo maalintii ugu horraysay, [More ...]
Dhismaha Ordu Boztepe 6 3 Milyan Qof ayaa Lagu Caawiyay Sannadka
Ordu Boztepe Ropeway 6 3 Malaayiin Qof Oo Xambaarsan Sannadkii: Xarigga ayaa loo dhisay in lagu fududeeyo marin u helka Boztepe laga bilaabo bartamaha magaalada illaa dhererka '530 m' ee Ordu. [More ...]
RayHaber 06.01.2017 Warbixinta Shirka
Qalabka Dhismayaasha Diyaarinta Kala Duwan Ee Lagu Heli Karo (TÜLOMSAŞ) Horozluhan Gargaarka Shaqaalaha Dhismayaasha Xarunta Cusub ee Cusub
Hatayda Tababarka ardayga ayaa ku dhacay shil diyaaradeed 6
6 oo ku dhaawacmay adeegga ardayda tareenka ayaa ku dhuftay Hataya: degmada Payas ee tareenka xamuulka rarka, ardayda ayaa ku burburtay baska adeega ee sidday ardayda 6 ardayda ayaa ku dhaawacmay shilka. Shil, waxay kuxirantahay degmada 15.00 waqtiga [More ...]
Waxay fuulayaan Uludağ iyaga oo u jeeda fiirsashada Gawaarida Cable: In kasta oo lodosyada daran ee kordhaya saameynta Bursa ay sii wadaan inay saameyn xun ku yeeshaan nolosha, qolka 176 wuxuu qaadi karaa kun rakaab ah 500 saacadiiba kiiloomitir 9 waa midka ugu dheer ee gawaarida gawaarida adduunka. [More ...]
Samulaş ayaa ka hortagaya caqabadaha
Samulaş wuxuu meesha ka saarayaa caqabadaha: Dawlada Hoose ee Magaalada metela Samuun Samu A.Ş. iyo Ururka Samsun ee Naafada Dadka Naafada ah (SAMEF) si ay u qiimeeyaan galaangal u yeelashada baabuurta nidaamka tareenka, Khadadka nidaamka tareenka, basaska iyo joogsiga basaska ee dadka naafada ah. [More ...]